Soo Dhaweyso Barnaamijka Soo Dejinta ee Loogu Talagalay Jio Taleefanka [Deg Deg Deg Deg Ah] | RoidHub
blog Business Homepage
»Zoom App Soo Degso oo loogu talagalay Jio Telefoon Deg Deg ah]
Ku dhawo barnaamijka App-ka ee loogu talagalay Jio Phone [Degdeg Deg Deg ah]
Karantiil ama maya. Hadday tahay inuu jiro cudur ama inuu jiro. Wicitaanka fiidiyaha wuxuu noqday mid daruuri ah. Markaa haddii aad tahay isticmaale taleefanka Jio, halkan waxaan ku sharxi doonaa habka loo yaqaan Zoom App-ka oo loogu talagalay Jio Phone.
Markii ay dhacday masiibada, waxaan soo marnay xilliyo aan horay loo arag. Noloshu way rog rogtay. Xorriyadda safarka iyo dhaqdhaqaaqa ee aan ilaa hadda u qaadanay waxay noqotay raaxo.
Xaaladahan oo kale, Suuragal ma ahan in laga fogaado shaqada, oo lagu hayo qolka qolka iyadoo laga baqayo inuu virus fido.
Tani waa sababta ganacsatada iyo xafiisyada ay ula imaanayaan waxyaabo kale oo ay ku sii socodsiiyaan howlahooda sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Xaaladdan oo kale, adeegsiga barnaamijyada iyo codsiyada fiidiyowgu waxay noqdeen hab caadi ah oo looga shaqeeyo, shirarka, iyo falanqaynta.
Hadaad isticmaaleyso taleefan Jio ah gudaha India. Waxaa kuu sahlan inaad kula xiriirto asxaabtaada ama kuwa aad jeceshahay adigoo adeegsanaya barnaamijyo fiidiyow ah sida Zoom App. Waxaan ku siin doonaa habka iyo meesha aad ka heli karto.
Soo Dhaweyn Soo Dejinta App-ka Telefishanka Jio: Sidee loo sameeyaa?
Tilmaamooyinka Zoom App
Sida loo soo degsado barnaamijka Zoom ee loogu talagalay Jio Phone
Sida loo sameeyo Zoom App APK Download ee loogu talagalay Jio Phone
Barnaamijka Zoom App waxaa loogu talagalay mobilada iyo sidoo kale PC-yada. Sidoo kale waad kala soo degsan kartaa oo ku rakibi kartaa codsigan taleefankaaga Jio. Adeegsiga waad ku biiri kartaa shirarka ka qaybgalayaasha ilaa boqol qof.
Iyada oo ay dadbadan oo caynkaas ahi jiraan waxaad arki kartaa midab cad, tayo sare leh, is-dhexgal fool-ka-fool ah, oo ka-qayb-galayaasha. Isla mar ahaantaana wadaaga shaashaddaada iyo la xiriirista adigoo adeegsanaya farriinta deg-degga ah ee app-ka.
Barnaamijka Zoom App ee abaalmarinta ku guuleysata ee taleefanka Jio waxaa loo isticmaali karaa shirarka khadka tooska ah, wadahadalka fiidiyowga, iyo farriinta kooxeed iyadoo la adeegsanaayo hal barnaamijkan.
magaca Kulan Soo Dhaweyn ah
Magaca Xidhmada noocee.zoom.videomeetings
Loobaahanyahay Android 5.0 iyo sare
Codsigan ayaa ah kan ugu wanaagsan dhammaan codsiyada noocan ah. Waad ku raaxeysan kartaa astaamaha soo socda mar haddii Zoom App soo dejiso taleefanka Jio uu dhammaado.
Tayada ugu wanaagsan ee wadaagista shaashadda
Si toos ah shaashadda ula wadaag taleefankaaga Jio.
Sawirrada shaashadda la wadaago, websaydhada, wadista Google, faylalka sanduuqa, iyo sanduuqa boosta, ama dukumiintiyada kale
Ugu diro qoraallo badan, sawirro, iyo faylal cod ah isla markiiba taleefankaaga Jio adoo riixaya.
Muuji heerka helitaanka.
Waxaad ku casuumi kartaa xiriiriyeyaasha taleefankaaga ama xiriiriyeyaasha emaylka.
Waad uga qeybqaadan kartaa dhageysi ahaan ama sida qof firfircoon oo hadlaya
Waxay ka shaqeysaa dhammaan xiriirada internetka oo ay ku jiraan 3G / 4G ama WiFi xiriiriye.
Waa inaad siisaa akhrin si aad u raacdo U isticmaal maqaal buuxa oo isticmaalayaasha telefishanka JIO.
Dabka Bilaashka ah ee Jio Phone
Waxaa jira laba qaab oo loo soo dajiyo codsigan. Mid wuxuu si toos ah uga socdaa google play store kan kalena waa sida faylka loo yaqaan 'APK file' oo markii dambe lagu rakibi karo mobiilka Jio. Waa tan sida loo soo dejiyo Google Playstore.
Tag Google Play Store (Xiriirka dhamaadka maqaalka)
Ka raadi barnaamijka Zoom App-ka adigoo adeegsanaya barta raadinta ee sare ee bogga.
Taabo ama guji ikhtiyaarka rakibida
Marka howsha la dhammeeyo, waxaad ka heli kartaa sumadda app-ka shaashadda taleefankaaga Jio. Kaliya dhagsii si aad u furto isla markaana isla markaaba ugu xirnaato.
Tani waxay u fududahay sida habka loo rakibo tooska ah. Halkan waxaad u baahan doontaa inaad ka gudubto dhowr tillaabo oo dheeri ah oo aad gacanta ku rakibto gacanta. Waxaan ku sifeyn doonnaa habsami u socodka. Kaliya waa inaad ku dhaqaaqdaa sida ay u kala horreeyaan tirooyinka ay muujinayaan.
Tallaabada ugu horeysa waa inaad kala soo baxdo faylka "APK". Taas awgeed, waa inaad riixdaa ama taabataa badhanka 'Download APK' ee hoosta.
Tani waxay ku bilaabi doontaa hawsha muddo 10-ilbiriqsi ah (waxay kuxirantahay xawaarahaaga internetka).
Marka hawsha la dhammeeyo, ku hel faylka loo yaqaan "APK file" buuggaaga moobiilka oo guji dusha.
Halkan waxaa laga yaabaa in laguugu dhiirrigaliyo inaad karti u siiso xulashada Ilaha aan la aqoon. Taas waad ka sameyn kartaa goobta amniga.
Kadib taabo dhowr jeer oo kale, oo waxaad joogi doontaa dhamaadka howsha rakibaadda.
Tani waxay dhameystiraysaa nidaamka rakibaadda. Waxaad hadda u adeegsan kartaa Zoom wicitaanada fiidiyaha iyo isgaarsiinta.
Soo dhaweyn barnaamijka app-ka ee taleefanka Jio wuxuu u baahan yahay talaabooyin sahlan oo la raaco. Markaa waxaad ku raaxeysan kartaa dhamaan astaamaha uu barnaamijkan argagaxa leh u muuqdo. Si aad u hesho Zoom APK-ka si aad u taabato xiriiriyaha hoose ama si toos ah waad ugu tegi kartaa Play Store adigoo gujinaya xiriiriyaha labaad.
Soo Dhaweyn APK
Soo dhaweyn App
Soo Dhaweyn Soo Dejinta App-ka ee Jio Phone
Doorka Doorka (9)
wax soo saarka (22)